Kuguma kweDemokrasi kunogona zvakare kuve kupera kweKushanya kuMyanmar
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Myanmar Breaking Nhau » Kuguma kweDemokrasi kunogona zvakare kuve kupera kweKushanya kuMyanmar
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • Myanmar Breaking Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Kuguma kwedemokrasi muMyanmar kunogona kunge kuri kupera kwekushanya? Izvi zvinogona kuve mhedzisiro kunze kwekutora kwemauto zvakare Mutungamiri weUS Biden ane hanya zvakanyanya.
Demokarasi yeMyanmar haina kugara kana makore gumi nekuparadzwa kwehurumende yakasarudzwa nemauto nezuro
Mutungamiri weU.S. Biden uye Munyori weHurumende Blinken vari kunetsekana nemamiriro ezvinhu nekusungwa kwevatungamiriri vehurumende
Rimwe gore State of Emergency ichapa hurumende yechiuto nguva yakaringana yekugadzirisa hutongi hwezvido zvevanhu zvakare muhudzvanyiriri, ichiparadza zvakare yakakosha indasitiri yekushanya neyekushanya.
Myanmar iri pasi pehutongi hwemauto zvichitevera kupidigura kwaMuvhuro, umo mauto akasunga mutungamiri wenhau Aung San Suu Kyi ndokuzivisa mamiriro ekukurumidzira kwegore rose. Vemauto vanoti bato raAung San Suu Kyi rakakunda musarudzo dzaMbudzi wadarika nekuda kwehunyengeri.
Kodzero dzevanhu dzinogona kuve nhoroondo zvakare kune ino nyika yeSouth East Asia uye nhengo yeASEAN.
MuWashington nhasi mutungamiri weAmerica Biden nemunyori Blinken vati, United States iri kushushikana zvikuru nekuchengetwa kwemauto eBurma kwevatungamiriri vehurumende, kusanganisira State Counsellor Aung San Suu Kyi, nevatungamiriri vemasangano akazvimirira.
Mauto eMyanmar akagadzira dambudziko kuitira kuti ripinde zvakare semuponesi anofungidzirwa weBumbiro nenyika, uku achikunda muvengi wezvematongerwo enyika anogara achizivikanwa.
Mushure mekuongorora kwechokwadi chese, Hurumende yeUS yakaongorora kuti zvakaitwa nemauto eBurma musi wa1 Kukadzi, vabvisa mukuru wehurumende akasarudzwa, vakaita musoja coup d'etat.
United States icharamba ichishanda pamwe chete nevatinoshanda navo mudunhu rese nepasirese kutsigira kuremekedza hutongi hwezvido zvevanhu pamwe nekutonga kwemutemo muBurma, pamwe nekusimudzira kuzvidavirira kune avo vane mhosva yekuchinja shanduko yesununguko yeBurma.
IUS haisati yabvunza neChina pane coup.
Iyo 2011-2012 Burmese demokrasi shanduko yaive inoteedzana nhevedzano yezvematongerwo enyika, zveupfumi uye zvehutongi shanduko muBurma yakaitwa nehurumende inotsigirwa nemauto. Shanduko idzi dzaisanganisira kuburitswa kwemutungamiri wepro-democracy Aung San Suu Kyi kubva pakusungwa pamba uye nhaurirano dzakazotevera naye, kumisikidzwa kwe Komisheni inoongorora kodzero dzevanhu, zvivaraidzo zvevasungwa vanopfuura mazana maviri vezvematongerwo enyika, kuiswa kwemitemo mitsva yevashandi inobvumidza masangano evashandi pamwe nekuramwa mabasa, kuzorodzwa kwekudzvinyirirwa kwevatori venhau, nemitemo yemaitiro emari.
Semhedzisiro yeshanduko, ASEAN yakatambira chikumbiro cheBurma sachigaro muna2014. United States Secretary of State Hillary Clinton yakashanyira Burma musi wa1 Zvita 2011, ichikurudzira kufambira mberi; kwaive kushanya kwekutanga neMunyori weHurumende yeUS mune makore anopfuura makumi mashanu. Mutungamiriri weUnited States Barack Obama akashanyira gore rimwe gare gare, achiva mutungamiri wekutanga weUS kushanyira nyika.
Bato raSuu Kyi, National League for Democracy, vakapinda sarudzo yakaitwa musi wa1 Kubvumbi 2012 mushure mekunge hurumende yabvisa mitemo yakazoendesa kurwisa kweNLD 2010 sarudzo huru. Akatungamira NLD mukukunda sarudzo dzekutsvaga mumatare, kuhwina makumi mana makumi mana nemana kubva pazvigaro makumi matatu nezvina, Suu Kyi pachake achikunda chigaro chinomiririra Kawhmu Dunhu munzvimbo imba yepasi ye Paramende yeBurma.
2015 sarudzo mhedzisiro yakapa iyo Sangano reNational for Democracy an mhedziso ruzhinji yezvigaro mumakamuri maviri eparamende yeBurma, zvakakwana kuti ave nechokwadi chekuti mukwikwidzi wake achave mutungamiriri wenyika, apo mutungamiri weNLD Aung San Suu Kyi inorambidzwa nebumbiro kubva pachigaro. Zvisinei, kunetsana pakati pemasoja eBurma ne mapoka evapanduki chakaenderera.
Paramende nyowani yakasangana musi wa 1 Kukadzi 2016 uye, musi wa15 Kurume 2016, Htin Kyaw akasarudzwa semutungamiri wekutanga asiri wemauto wenyika kubvira Mauto coup ya1962. Aung San Suu Kyi kufungidzira iro richangogadzirwa basa reiyo State Counsellor, chinzvimbo chakafanana neChishanu, musi wa6 Kubvumbi 2016.
Kukunda kwakasimba kwe Aung San Suu KyiSangano reNational League for Democracy musarudzo dza2015 rasimudza tariro yekuchinja kwakanaka kwe Myanmar kubva pane yakanyatsobatwa uto tonga kune yemahara democracy. Zvisinei, mhirizhonga mukati mezvematongerwo enyika, kuparara upfumi uye ethnic kukakavara ramba uchiita shanduko ku democracy inorwadza. Kuponda kwe2017 kwe Ko Ni, gweta rakakurumbira reMuslim uye nhengo yakakosha ye MyanmarSangano rinotonga reNational League for Democracy rinoonekwa sekurwadzisa nyika isina kusimba democracy. Kuuraya kwaVaKo Ni kwakabviswa Aung San Suu Kyi yemafungiro ake semupi wezano, kunyanya pakuvandudza MyanmarBumbiro-rakanyorwa muchiuto uye kuunza nyika ku democracy.